युरिक एसिड कसरी नियन्त्रण गर्ने ? - सल्लाह - नारी
युरिक एसिड कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
आश्विन २२, २०७२
आधुनिक जीवनशैली एवं खानपानले धेरैजना युरिक एसिडको समस्याले पीडित छन् । दीर्घकालीन रोगका रूपमा लिइने युरिक एसिडबाट जोगिन निम्न उपाय अपनाउनुपर्छ।
–सर्वप्रथम शरीरको तौल नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बढी तौल भएको शरीरमा युरिक एसिड थुप्रिएर बस्छ र रगतमा प्रसार हुन्छ।
–मासुजन्य खाद्यपदार्थमा प्युरिन हुन्छ, जसको सेवनले युरिक एसिड बढाउँछ । खासगरी रातो मासुको उपभोग कम गर्नुपर्छ । कलेजो, किड्नी, मुटु आदिको उपभोग सकेसम्म घटाउनुपर्छ । मासुको सुप, बियरजस्ता प्रशोधित तरल पदार्थको सेवन पनि कम गर्नुपर्छ । सिमी, तोरीको साग, पालुंगोको साग, खसी एवं हाँसको मासु, गंगटा, आइसक्रिम, पाउरोटी, केक आदिको सेवन पनि युरिक एसिडको कारक बन्न सक्छन्।
–मिर्गाैलाको संचालन प्रभावकारी नहुँदा युरिक एसिडको मात्रा बढ्छ । त्यसैले दिनहुँ कम्तीमा १० गिलास पानी पिउनुपर्छ।
–क्याल्सियमयुक्त खानाको सेवन बढाउनुपर्छ । केरा, आलु, दूध, दही, स्ट्रबेरी, कागती आदि नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्छ।
–अल्कोहल, कोक, फेन्टा, स्प्राइट, पेप्सी, मिरिन्डाजस्ता सफ्ट ड्रिंकको सेवन घटाउनुपर्छ।
–तारेको खानेकुरा कम खानुपर्छ । तारेको खानेकुरामा भएको तेल तथा फ्याट रेनसिडमा परिणत हुन्छ। रेनसिडको उपभोगले शरीरमा अन्तरनिहित भिटामिन ई नष्ट गरी युरिक एसिड प्रसार हुन्छ।
–शारीरिक व्यायाम नियमित गर्नुपर्छ।
पुस ३, २०७२ - पहिरन छनोट गर्ने तरिका
मंसिर २३, २०७२ - जिन्सको छनोट कसरी गर्ने ?
मंसिर २१, २०७२ - टिनएज समस्या ह्यान्डल गर्ने उपाय
मंसिर १५, २०७२ - जाडोमा हुने छालाको सुख्खापन कसरी हट्छ ?
मंसिर १३, २०७२ - स्तन क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने ?
मंसिर १०, २०७२ - समय बचत गर्ने उपाय
थप केही सल्लाहबाट
भान्साका औषधि मंसिर १४, २०७५
साउन र वर्षाका लागि कस्तो मेकअप उपयुक्त हुन्छ ? श्रावण १, २०७५
क्रेडिट कार्ड मिस्टेक कार्तिक १९, २०७३
कसरी बन्ने परफेक्ट श्रीमान् चैत्र ३, २०७२
ऊनको एलर्जीबाट जोगिन पुस ५, २०७२
डाइनिङ टेबलको सजावट पुस ३, २०७२